क्रियाशील सदस्यताको काम अधुरै : रमेश लेखकका भाइ म्यानेजर रहेको धर्मशालामा खाना खर्च मात्रै ६० लाख ! - Media Dabali
शुक्रवार, आश्विन १ २०७८Sep 17 2021
देउवा र प्रकाशमानबीच बालुवाटारमा दुई घन्टा ‘गोप्य’ भेटवार्ता, बोहोराटारमा तनाव !
ललितपुरमा कांग्रेसलाई चम्काउन सभापतिको दौडमा रहेका मीनकृष्ण महर्जनका यी १५ प्रतिबद्धता
अन्ततः एमालेमा योगेश भट्टराईले बाजी मारे !
कांग्रेसमा शीर्ष नेताबीच जुट्यो सहमति, यसरी सार्वजनिक गरिँदैछ क्रियाशील सदस्यता
Musician KC Constantly Getting Royalties, Here Who He Is?
बिष्णु माझीको 'यथार्थको जिन्दगी...' सर्बत्र चर्चा [ भिडिओ ]
छोटो समयमा नै चर्चा बटुल्दै 'नयाँ गलबन्दी...', पल र बर्षाको दमदार नृत्य [ भिडिओ ]
चीनले नेपाली सीमास्तम्भ कहाँ–कहाँ मिच्यो ? हेलिकप्टरबाट एकेक हिसाब निकाल्दै अध्ययन समिति
लोक तथा दोहोरी गायक नेत्र प्रसाद काफ्ले र लक्ष्मी खड्काको आवाजमा 'चरि नाचेको...' रिलिज [ भिडिओ ]
बुधवार, श्रावण १३ २०७८
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवादहरुलाई टुग्याउनका लागि गठित कार्यदलले काम पूरा गर्न नसकेर मंगलबार प्रतिवेदन तयार गर्यो । उक्त प्रतिवेदन अनुसार अझै चार जिल्लाको क्रियाशील विवाद कायमै रहेको छ ।
काम गर्न नसकेको आरोप लागको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकलाई भने प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले फेरि अर्को जिम्मेवारी दिइसकेका छन् । उनलाई सरकार सञ्चालनका लागि बनेको सत्तापक्षीय दलहरुको कार्यदल सदस्यमा पनि लेखकलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । एकतिरको काम अधुरै छोडेका लेखकलाई अर्कोतर्फको जिम्मा दिइएको हो ।
पार्टीभित्र सुरुदेखि जिम्मेवारीविहीन बनेका अन्य योग्य नेताहरु हुँदाहुँदै पनि देउवाले लेखकलाई अघि सार्दा उनको समूहभित्र नै आलोचना भइरहेको छ । क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको कार्यालय लेखकले आफ्नो भाइ दिपक लेखक म्यानेजर रहेको तिलगंगास्थित नेपाल भारतमैत्री धर्मशालामा राखिएको छ । काठमाडौंका पाँच तारे होटल जत्तिकै महँगो रहेको उक्त धर्मशालामा कार्यालय छ भने त्यही खाना, चिया नास्तादेखि बसोबासको पनि सुविधा रहेको छ ।
उक्त धर्मशालाका म्यानेजर दिपक लेखक समितिका संयोजक रहेका रमेशका भाइ हुन् । उनले भाइलाई कमिसन आउने भएकोले पनि समिति कार्यालय उक्त धर्मशालामा नै स्थापना गरेको आरोप लगाइएको छ । समितिका अन्य सदस्यहरुले बैठक पार्टी कार्यालयमा बस्नुपर्ने र पार्टीको खर्च कम हुने बताए पनि लेखककै जोडबलमा समितिको बैठक धर्मशालामा बसिरहेको छ । धर्मशालाकै एक अधिकारीका अनुसार हालसम्मको खाना खर्चमात्रै ६० लाख उठेको बताइएको छ ।
उक्त रकम भुक्तान गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ । यसअघि लेखकले समितिका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद गर्न ४० लाख पेश्की माग गरेका थिए । त्यसअघि नै पार्टीले पेश्कीरुवरुप समितिलाई १५ लाख रुपैयाँ बुझाएको थियो ।
एक करोडभन्दा बढी खर्च, काम अधुरै
समितिले क्रियाशील सदयस्ता छानबिनकै नाममा एक करोड २० लाखभन्दा बढी खर्च गरे पनि काम भने पूरा गर्न सकेको छैन । लेखेक संयोजक रहेको समितिले काम गर्न नसकेपछि क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद फेरि छानबिन समितिमै पुगेको छ । बुधबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले छानबिन समितिलाई थप विषय मिलाउने गरी जिम्मेवारी दिएको हो ।
नेता रमेश लेखक नेतृत्वको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले हिजोमात्रै पार्टीसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा समिति सदस्य कल्याण गुरुङले असहमति जनाउँदै नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् । करिब ८ लाख क्रियाशील सदस्य रहेको कांग्रेसको यो विवाद टुंग्याउन पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि केही जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
देउवाले विश्वास गरेका पात्र लेखकले नै देउवालाई नै आलोचित हुने गरि काम गरिरहँदा पनि देउवाले फेरि फेरि उनीहरुलाई नै जिम्मेवारी दिने गरेका छन् । जसका कारण पार्टीभित्रै देउवाको आलोचना हुने गरेको छ । तर, पछिल्लो समय निकै संवदेनशील समय भएकालेले योग्य र काम गर्नसक्ने व्यक्तिहरुलाई सल्लाहकारमा नियुक्त गरे अघि बढ्न देउवालाई सुझाव दिनेहरुको संख्या पनि बढेको छ ।
कांग्रेसकी यी महिला सांसदले पाइन् संसदमा ठूलो जिम्मेवारी !
लगनखेल डोजोको भोजन वितरणमा कांग्रेस नेताहरूको सहयोग
शनिवार, बैशाख २७ २०७७०२:१६:१७
संसदमा उत्पात मच्चाएको एमालेले अग्निको पावर देख्यो, कुरा सुनेर बालकोटमा जिल परे ओली
१४ सांसदको पद खारेजी मुद्दा सुनुवाइबारे सर्वोच्चको यस्तो निर्णय, ओलीलाई झड्का लाग्ने संकेत !
बजेट ‘होलिडे’ हुनुको दोषी को ? कर्मचारी, शिक्षक, सेना–प्रहरीको तलब र दशैंभत्ता रोकिने
सुकुम्बासी आयोगमा माओवादीलाई मिल्यो भागबण्डा, देशभर कति जना हुँदैछन् नियुक्त ?
देउवा सरकारको उपहार : दशैंमा गरीबलाई १० हजार, बिरामीलाई महिनाको ५ हजार
एमाले सरकारमा ५ जना नयाँ मन्त्री नियुक्त, यी हुन् भाग्यमानीहरू (नामसहित)
सुकुम्बासी आयोग गठन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, यी हुन् नवनियुक्त अध्यक्ष
कांग्रेसमा सभापति देउवाविरुद्ध विद्रोहको संकेत !